Dowlada kenya oo shacisay in la gaarey xiligii qaxootiga Somaliyeed laga talaabin lahaa xaduud beenaadka u dhaxeeya Kenya iyo Somaliya | Somalisan.com Home
Dowlada kenya oo shacisay in la gaarey xiligii qaxootiga Somaliyeed laga talaabin lahaa xaduud beenaadka u dhaxeeya Kenya iyo Somaliya 12/11/2012 1:02:00 �degdeg ayaan soomaalida ugu celin doonaa gudaha Soomaaliya madaama gobolo badan la nabadeeyay�ayuu yiri Raila Odinga oo sidoo kale gudi u saaray dib u celinta Soomaalida.
Sida uu warbaahinta u sheegay Ra’iisulwasaraha dalka Kenya Raila Odinga waxaa la soo gaaray xiligii qaxootiga Soomaaliyeed lagu celin lahaa gudaha dalka Soomaaliya. Ra’iisulwasaale Raila Odinga wuxuu carabka ku dhuftay inuu sida ugu dhow loo celin doono qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari oo ah dhul soomaaliyeed balse kenyaatigu uu si sharci daro ah ku siiyay gumeystihii dalka Soomaaliya 1884-tii.
“degdeg ayaan soomaalida ugu celin doonaa gudaha Soomaaliya madaama gobolo badan la nabadeeyay”ayuu yiri Raila Odinga oo sidoo kale gudi u saaray dib u celinta Soomaalida.
Dhanka kale Raila Odinga wuxuu amaan darada Islii ku dhaliilay soomaalida sida uu sheegay sharci darada ku joogta waxaana uu xusay inaysan u dul qaadan doonin waxa islii ka taagan.
“xaalada islii maaha wax aan eegan karno,waxaan ka dowlad ahaan qaadeynaa talaabooyin dib loogu celinayo dadka Soomaalid ah ee bilaa sharciga ah”ayuu mar kale yiri Raila Odinga. Warar kale oo xiiso leh halkaan ka aqriso. tweet FG: Shabakada Wararka ee Somalisan Mas'uul kama ahan Cidii ku xadgudubto Shaqsi Raalina kama noqonayso Somalisan.com. Fikirkaaga hoos kadhiibo: